Itoobiya ayaa sheegtay in ciidamada Ereteriya ay bilaabeen ka bixitaankooda deegaanka Tigray - Wardeeq 24 TV Itoobiya ayaa sheegtay in ciidamada Ereteriya ay bilaabeen ka bixitaankooda deegaanka Tigray Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Itoobiya ayaa sheegtay in ciidamada Ereteriya ay bilaabeen ka bixitaankooda deegaanka Tigray
Itoobiya ayaa sheegtay in ciidamada Ereteriya ay bilaabeen ka bixitaankooda deegaanka Tigray
Wasaaradda arrimaha dibedda ee Itoobiya ayaa sheegtay in ciidammada Ereteriya ay bilaabeen ka bixitaanka gobolka Tigreega ee woqooyiga Itoobiya.
Mareykanka, Jarmalka, Faransiiska iyo waddamada kale ee G7 waxay ku baaqeen jimcihii in si deg deg ah, shuruud la’aan iyo xaqiijin looga saaro askarta Eritereya, waxaana ku xigay hannaan siyaasadeed oo ay raalli ka yihiin dhammaan Itoobiyaanku.
Dib-u-soo-celin ay soo saartay Sabtidii iyada oo loo sii marinayo Wasaaradda Arrimaha Dibadda, Itoobiya waxay ku sheegtay in bayaanka wasiirrada arrimaha dibedda ee G7 uusan aqbalin tallaabooyinka muhiimka ah ee loo qaaday si wax looga qabto baahiyaha gobolka.
“Ciidamada Eriteriya ee kasoo gudbay xadka markii ay ka careysiisay kooxda TPLF waxay hada bilaabeen in ay faarujiyaan waxaana ciidanka difaaca qaranka ee Itoobiya ay la wareegeen ilaalinta xuduuda qaran,” ayaa lagu yiri bayaan.
Dagaal ayaa ka qarxay Tigray horaantii Nofeembar ka dib markii xoogag daacada u ah xisbigii markaa xukumi jiray halkaas – Jabhadda Xoreynta Dadka Tigray (TPLF) – ay weerareen fariisimaha ciidamada ee gobolka oo dhan. Dabayaaqadii bishii Nofeembar, ciidamada federaalka waxay kooxda TPLF ka saareen magaalada caasimada ah ee Mekelle waxayna dawladda Itoobiya ku dhawaaqday guul.
Kumanaan kun oo qof ayaa ku dhintey iskahorimaadka, boqolaal kun ayaa laga qaxay guryahooda waxaana jira gabaabsi cunto, biyo iyo daawo ah oo ka jirta gobolka. Dowladdu waxay sheegaysaa in dagaalladii ugu badnaa ay joogsadeen laakiin ay weli jiraan dhacdooyin gooni ah oo toogasho ah.
Helitaanka buuxa ee gobolka ayaa hadda loo oggolaaday ururada samafalka, Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa tiri, iyada oo intaa ku dartay in baaritaan wadajir ah oo ay la yeelanayaan khubaro dibedda ah oo ku saabsan xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee la sheegayo ay dhowaan bilaabi doonaan.
“In kasta oo dowladda … daacadnimadu ay qaddarinayso walaacyada la muujiyay, haddana waxayba u muuqatay in sahayda cunnada iyo gargaarka dawadu ay tahay inay noqdaan waxyaabaha ugu badan ee laga muujinayo walaacyada,” ayay tiri wasaaraddu.
Previous articleMadaxa gaashaandhigga ee Filibiin ayaa sheegay in Shiinaha uu damacsan yahay in uu qabsado aagag badan oo ku teedsan Koonfurta Shiinaha
Next articleXARIIR AHMED |HEES CUSUB 2021